Isita mukanyiwa mabhasiketi Art sens - mazano eimba nebindu
19.03.2014 Yakatumirwa na: Art Sense
Pfungwa Pamba, Recipes, Kubika kweIsita
Yakagadzika mukanyiwa mabhasiketi inzira inoratidzika uye yakajeka yekushandira Isita mazai uye mazai. Kushongedza kwakanaka kwazvo kwetafura yemafaro, maunogona kushumira saladi, appetizer, dzakasiyana-siyana ndiro.
Kusunga bhasikiti chiitiko chakaomarara, asi chakanyanya kukodzera paIsita uye kuronga mazai akashongedzwa. Pane nzira dzakawanda dzekugadzira, asi zvisizvo vese vanovimba nechimiro cheimwe chombo.
- Inosarudzwa hupfu - muchimisikidzo, sosi dzinonyanya kukodzera sezvo dzisinganyengerere zvakawanda pakubika, asi izvi zvinoshandawo kune mamwe mbiriso butter mbishi uye vamwe kune pizzas.
-Chinogamuchirika chinogamuchira chinogadzira dengu.
- Mafuta - chero yemiriwo kana mhuka yakakodzera.
- Yakaputswa yezai nezvipunu zviviri mvura - yekuparadzira.
- Aluminium foil kana pepa rekubheka, chero bedzi mukanyiwa banga haugone kuve wakananga pane pani.
- Toothpick kuchengetedza mamwe marudzi ebhabhi uye kubata, kana iwe wakapa imwe.
Gurudza kunze rectangle yeunoda ukobvu uye gura mitsetse yakakodzera. Shandura pani inovhiringidza pasi padivi, kufukidza ne foil kana pepa sezvinodiwa uye nyatsoisa mafuta pasi rese. Knit mitsetse yehupfu pane yakagadziriswa chigadziko uchishandisa nzira yakasarudzwa, nekuchenjera kutema zvisina kukodzera miganho yaunokwanisa kutenderedza. Simbisa nekumanikidza, uye kana izvo zvisina kukwana, chengetedzwa nemazino. Iwe unogona zvakare kuisa dheti yekusika nekucheka pasta maumbirwo (semuenzaniso, mashizha-akaumbwa). Kana iyo pani yese yakafukidzwa, pinda kumusoro, kureva. kuti zasi repasi rive kunyange, svina yai inorohwa uye nzvimbo mune preheated 180 ° C kusvika 220 ° C (zvichienderana nehupfu) oven. Bika kusvikira goridhe brown. Kana iwe uchida, ronga uye isa bhasiketi mubato wakaenzana. Iyo inochengetedzwa nerubatsiro rwemazino apo tswanda inotonhorera. Izvi zvakanyanya kuoma nehupfu hwesoda. Tora kubva pachigadziko, bvumira kuti itonhore uye iwe wagadzirira kushanya kwehoridhe. Kana iwe usingaronge kushandira mukati meanotevera 24 maawa, saka mushure mekutonhora pasi, iwe unofanirwa kuisa dengu muhamvuropu.
kurongeka, Isita bhasiketi, Masiki eIsita, Isita mukanyiwa mabhasiketi, pfungwa, mazano epamba, zano reIsita, tswanda, Masiki eIsita, mabhasikiti emukanyiwa, bhasiketi rezai, mabhasikiti akarukwa, Isita yekubheka, nzira yekugadzirisa mabhasiketi, mapikicha, mukanyiwa zvokubikisa, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Iyo yakanakisa machira emukati, windows uye balconies. Iko kushongedza uye kurongeka kwechiso. Ivo ...
Mufashoni Maitiro mu2013 Wallpaper
Kuunza maitiro emafashoni emapikicha kuburikidza ne2013 Sezvauri kuona, mune zvakawanda ...
Mamwe anoshamisa anoshamisa marara ekushongedza mazano. Isu tinopa mazano uye zvinogoneka ...
Ipa mufaro kumhuri yako uye shamisa vadiki pazororo neKisimusi inonaka ...
Nzira inonakidza uye inonakidza yekuita iyo kurota kwemusha wakakwana, kunyange zvishoma ..
Sarudza nzvimbo dzekona
Iyi ipfungwa yakavakirwa pane yakamboratidzwa inoshanda shangu kabhoni inonzi "Lazy ...
Chii chingave chakakwana chamangwanani kana chemanheru kana iwe uine zvakasiyana, zvakaringana ...
Pfungwa ina dzinokurudzira yeyadhi uye gadheni. Heano maitiro aungagadzira nzvimbo dzakanaka ...